NetBase: Ntanetị Social Intelligence Platform | Martech Zone
NetBase: priselọ ọrụ Social Intelligence Platform
Sunday, July 22, 2012 Wenezde, August 6, 2014 Douglas Karr
NetBase, na mbụ Accelovation, bụ ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ ọgụgụ isi n'elu ikpo okwu na-enye ohere ka ndị na-eme nnyocha ahịa tụọ njikọta mgbasa ozi ha.
Net Base Monitoring Platform na-enye ndị na-ere ahịa ohere na nlekota oge yana ihe eji eme ihe na-enye nghọta na ngwa ngwa na mmekọrịta mmekọrịta na ihe na-eme ka ndị ahịa nwee echiche na omume. NetBase Insight Workbench na-enye ndi nyocha ahia ihe omuma nchịkọta, eserese na ngwaọrụ nyocha.
Nke a bụ ihe atụ nke Indbase's BrandPassion Index, nke ejiri iji chọpụta asọmpi nyocha nke ika (yana nnukwu ihe atụ nke ịzụ ahịa ezumike n'ofe ndị na-ere ahịa isi:)
CustomerBase, ngwa ngwụcha azụ nke Social Intelligence Platform na-arụ ọrụ, na-awụba ụgbụ, na-edepụta ọnwa 12 gara aga nke ọrụ ịntanetị, ma na-akwado echiche, echiche, na akara ngosi, na-enye nghọta nghọta.
Isi ihe dị iche na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya bụ nhazi asụsụ asụsụ. CustomerBase webatara okwu kwusi dị ka n'ihi na, by, n'ihi na or mgbe na Google na ngwa ọdịnala ọdịnala ndị ọzọ na-eleghara anya. Nsonye dị otú ahụ na-enye ohere ịkọwapụta ihe ndị gbara ya gburugburu na ezi mmetụta ahụ, na-enye ohere iji nweta echiche ka mma. Otu ikpe dị na ya: Google ga-akpado ọkụ nwere echiche na-adịghị mma, mana CustomerBase ga-atụle ọkụ na-ezi ìhè mgbe ahịrịokwu na-eji na onodu nke a mouthwash.
Isi USP nke abụọ bụ oke data. Ọnwa iri na abụọ nke ọrụ yiri ijeri ụda ijeri abụọ site na ihe karịrị ijeri akwụkwọ dijitalụ asaa. Companylọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ha na-ede ahịrịokwu 12 otu nkeji site na isi mmalite dịka Facebook, blọọgụ, forums, Twitter na saịtị ndị na-azụ ahịa.
Ndị na-ere ahịa nwere ike iji NetBase dị ka ngwa nyocha ahịa, iji nyochaa mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ iji weghachite nloghachi ha na itinye ego na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Site na saịtị ha:
Mee mgbanwe ngwa ngwa mee ka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi na-akpata ego. Mgbe olu mmadụ na-agwa gị ozugbo ebe mkpọsa gị na-aga nke ọma na ihe kpatara ha ji agba mgba, ị nwere ike ime ihe iji meziwanye nlọghachi na mmefu ahịa.
Mee ka mgbasa ozi na-erute na-achọpụta isi ihe na atụmanya. Know maara na e nwere "ndị na-elekọta mmadụ VIP" si n'ebe ahụ - ndị mmadụ na-anụ olu ha ka ha na-agwa ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ banyere akara gị na ndị asọmpi gị. Mara nke oma onye ha bu ma nyekwuo ha ihe ndi ozo. Mụtakwuo.
Mee ka ulo oru ohuru na emeputa ihe oma nke oma na-enyocha nlele nnabata ndị ahịa maka ngwaahịa ohuru ahụ ka ọ na-abanye n'ahịa na site na ịnyefe ngwa ngwa, mmeghachi omume edozi maka nsogbu na mkpesa nke nwere ike ibilite. Gụkwuo gbasara azịza nyocha ngwa ahịa ọhụụ anyị.
Nyochaa akara ahụ ike ugboro ugboro. Mee mma ika mkpebi na mee ngwangwa Ibọrọ ika egwu na a mbara set nke KPIs tụọ na jikwaa mmadụ ika ahụ ike na ezigbo oge. Gụkwuo banyere azịza nyocha anyị. Iji hụ otu ahụike ahụike na-emetụta nsogbu azụmaahịa ụwa, gụọ nyocha nke Starbucks na blọọgụ anyị.
Kọ omume osompi omume na ikwu ngwa ngwa na iyi egwu asọmpi na nyocha ngwa ngwa, ezigbo oge na ụdị asọmpi. Mụtakwuo ma hụ ụdị Mgbasa Ozi Anyị na-arụ ọrụ na blọgụ NetBase.
Ghọta nzaghachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka mkpọsa, iji mee mkpebi zuru oke. Hụ blọọgụ anyị ka ị mụtakwuo banyere akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal na-eji NetBase maka akụkọ nyocha mmetụta izu ụka ya.
Jiri ego na akụrụngwa gị mee ihe ndị ọzọ. Ngwọta NetBase na-akpaghị aka ịhazi usoro ihe omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ngalaba na usoro bara uru. Kama iji aka nyochaa ọtụtụ puku okwu, ihe onwunwe gị dị iji rụọ ọrụ iji melite mkpọsa.
Jide n'aka ijide enyi anyị, Jason Falls, Onye na eme Social Smarts Webinar maka Netbase na August 15, 2012: Kzọ KISS gaa Successga nke Ọma Digital Digital.
Tags: ọgụgụ isi na-elekọta mmadụụlọ ọrụ ọgụgụ isi na-elekọta mmadụnetbaseezigbo oge nlekotanjikwa ahanchịkọta mmadụọgụgụ isi mmadụmmesiri ndi mmaduntinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
ndị enyi gị
Jul 23, 2012 na 1: 22 AM
Mgbe ịzụrụ ndị Fans Facebook ọnụọgụ ndị ọbịa na ibe gị nke ọma ka saịtị gị ga-abawanye, na-enye gị ohere iji netwọk mmekọrịta ọha na eze na-abawanye ụba. Ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ndị mmadụ ugbu a na-eji saịtị ịkparịta ụka n'Ịntanet na-azụta iji jikọọ ndị enyi na ezinụlọ ha. Site na ọnụ ọgụgụ dị egwu nke ndị ahịa na-emepe netwọkụ kwa ụbọchị, ị nwere atụmanya na-akparaghị ókè iweta ụlọ ọrụ, ọrụ na ngwongwo gị n'ihu ndị ahịa na-atụ anya n'ụwa niile.